Mpanamboatra sy mpamatsy boaty Alloy Aluminium China | YSXF
Aluminin'ny Indostrian'ny sakafo an-tsakafo ...
Ny MaxxHaul Trailer Tongue Box dia natao hiakatra amin'ny tranofiara misy sarany A-Tongue mba hanomezana tahiry fanampiny ho an'ny fitaovanao, fitaovam-pilasiana, rojo fiarovana, fehy, fonosana fiara, kojakoja ivelany, tariby, kojakoja fampiasa, tariby, paosy kodiarana ary maro hafa . Aza adino mihitsy ny fitaovana na fitaovana rehefa mila azy ireo ianao!
- Vita avy amin'ny fitaovana alim-bolo maivana sy maharitra manohitra ny harafesina miaraka amina fanamboarana seam vita amin'ny lasitra ary famaranana palitao henjana
- Ny lamina takelaka diamondra dia manome tanjaka fanampiny ary manampy amin'ny fitazonana ny endriny ho mateza fanampiny
- Manasongadina fantson-tsolika hanampy amin'ny fanokafana ny sarom-baravarana, mitazona ny sarom-bilany ary fanidiana malefaka.
- Ny boaty dia mirefy 29 "lava x 18" ny halavany ary 17 "ny sakany ary 15" ny eo alohany.
- Fanidiana fonosana misy lakile 2 ary fehiloha voafintina tsara napetraka. Napetaka hinged dia napetraka mba ahafahana misokatra tanteraka ny sarom-bilany na dia miorina mivantana manohitra ny tranofiara aza
● boaty fananganana aliminioma mahery, tsy mahazaka harafesina
Miseho avo lenta sy maharitra, tsy fikojakojana firy
Ny fitaovana alimina maivana dia mampihena ny fiakaran'ny lanjan'ny traktera, ny tranofiara, na ny kamio.
● Famolavolana peratra famehezana
Izy io dia afaka miaro ny fahadiovan'ny atitany sy misoroka ny fidiran'ny orana sy ny anton-javatra ivelany hafa.
● Azo atao amina habe, loko ary fomba isan-karazany
Ny loko alimina madio sy mamirapiratra, ny habe rehetra dia azo namboarina, ary ny fitsaboana ambonin'ny tany, natao loko isan-karazany toy ny mainty, volondavenona, volafotsy ary fotsy.
Izy io dia azo amboarina amina endrika isan-karazany arakaraka ny takiana mba hahatratrarana ireo takiana hafa.
Previous: Turck Toolbox
Manaraka: Kitapo Toolbox
MAZAVA HO AN'NY FIOMPIANA MORA SY NY fitondrana, Ity boaty fitaovana ity dia namboarina tamina fanamboarana matanjaka nefa maivana hapetraka eo alohan'ireo zotram-pitaovana A-Frame. Mora ny mivory, mety tsara entina avy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa raha ilaina. Vahaolana lehibe amin'ny fitehirizana ireo fitaovanao na entana ao amin'ny garainao ary manampy toerana fitahirizana bebe kokoa amin'ny tranofiara mihidy anao. ✅ DURABLE DIAMOND RUGGED DESIGN - Namboarina tamin'ny alim-bolo vita amin'ny alim-bolo vita amin'ny kofehy feno vy, ho fampiasana mafy. Ny fitaovana fitehirizana ...
Fitaovana fitaovam-piarakodia / kamiao tsy mihidy vy Fametahana toetr'andro vita amin'ny vovoka mba hanoherana ny vovoka sy ny rano Ny sarom-baravarana / tampony dia mety hahatratra 1 1/4 santimetatra amin'ny toerana misokatra, miankina amin'ny fametrahana 1.5 mm alimina fanamboarana takelaka aluminium Fampidirana ny vokatra: vita amin'ny andian-dahatsoratra samihafa amin'ny alimina alimika, izay manana tombony amin'ny fisehoana tsara tarehy, lanja maivana ary enta-mavesatra. Toy ny atiny teknolojia an'ny alimina ...